Bittaa milkaaha tahee akkamitti rawwachuu dandeenya ? – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Bittaa milkaaha tahee akkamitti rawwachuu dandeenya ?
Yeroo addaa addaatti waa bitudhaaf ni karorfanna, Bittaa milkaha tahee osoo raawwannees nuti tola garuu gafgafi akka nuti yaadne tahuu dhisee waan hin barbadin bitnee gara manati deebina, Mee maalif akka taheef furmaata waliin ilaalla.
Kan nuti irratti walin ilaallu bittaa naannoo meshaa teekinolojii bituu irratti taha jechudha. Baayyen kessan laptopi,printarii fi kan biralee hatahuu bituudhaaf gara mana gurgurtaa (suuqi) yommuu deemtan gaaffin biraandi kamtuu gaaridha , modeli kamtu gaaridha , haallu kamtu gaaridha , kamtu orjinaalidha ? kan jedhu isan kessatti umaama, egaa kana kan ofgafachuun isinirra jiru osoo bakka gurgurtaa hin gahiin tahuu qaba. Kana tahuudha yoo baate waan itti hin karorsin , waan kessaa isaa haalan hin beekne, gatii hamma yaadanitti gaditi ykn olitti baaftani deebitu. Kana qofaanis dhabbata miti gaabbi hin barbaachifnee kessa isin seensisa! Akka fakeenyatti waajira kessanniif pirantariin isin bittan ppm 5 dandaha yoo tahee kan waajjira kessaniif barbachisu garuu 50ppm yoo tahee, baayyinni hojetoota kessaniif dandeettin kessummessuu pirantarii isin bitanii wal hin simu yoo tahee qusanaaa baasif jecha hojiikessan si’ahina gaaritin akka inni hin deemne gootu.
Akkuma kana immoo baasi isin barbachisneef saaxilamunillee rakkoo isa biraadha jechudha, akka fakkenyaatti yoo kaafnee ilaalle hojin kessan ykn dhimmi isin laptoopi bituu barbadaniif “ Basic use “dhaaf yoo tahee kan isin bittan garuu “ Gaming Laptop “ dha yoo tahee, baasi isin baaftan hanga isin barbachisuu olidha jechudha, qarshii isin osoo baasun isinirraa hin egamiin baaftan laptopi hojii kessan waliin walsimu isiniif bitee akka dabalatati “ Backup drive , flash disk , bag “ warren kana isiniif bituu dandaha.
Qabxilee nuti akka furmatati isin gargaru jennee amanu kanneen armaan gadii fakkatu, isinis furmaatota kana hojirra olchuudhaan bittaa milkaa tahee akka isin rawwatan ni amana.
1ffaa : Rakkoo keenyaa adda baafnee hubachuu
Inni kuun seensa waan hundaati maalif akka meesha nuti bituudhaf yaadnee nu gargaaru adda baafnee hubachuun barbachisidha , rakkoo maali meshaa sanaan akka hiiktan beekun gaaridha.Akka fakeenyaatti laptoopi yoo fudhanne , bituu keenyaan dura laptoopi sana dhimmi maalif akka fayyadamnu beekun nurraa egama! Fakkeenyaaf yoo injineera artitektidha tatan laptopi isin bittan kan dhimmi dizayiinii addaa hojechuudhaaf olu yoo tahee gaaridha.
Laptoopi geemii addaa addaa ittin tapachuudhaf oolu yoo bituudhaaf yaaddan bal’ina iskiriini , GPU (Graphics processor unit) , RAM (Random Access Memory) HDD/SSD – Solid state drive , Battery life , Speaker , Joysticks kannen akkas akkasii ilaalcha keessa galchuun barbaachisadha. Akkuma kana dhimmi kamifuu yoo tahee suuta jedhani itti yaadun baayyee barbachisaadha.
2ffaa : Ogessa komputeera waliin mariyachuu yaada ofii gadi fagenyaan itti himuun filannoo birandiifi modeeli akka isinitti himuuf ogessa wajjin mariyachuun amala/barsifata gaaridha. Egaa akka fakkenyatti laptoopifi pirantarii yoo kaafnee haasofneellee meshaawan ICT hatahuu akkasumas ismaartfoonillee yootahee ogessa mariyachisuun gaaridha, dogogora ofiin hojechuu dandenyuu baayyee waan nu olchuuf jechudha.
3ffaa :- Bakka gurgurtaa MAF(Manufacturer Authorization Form) qabanii bituun bu’a gurguddaa inni qabuu kessaa meeshaa bittaniif (Warranty) waarantii argachuu dandessu, tajaajila suphaa meesha bittan kanaaf ni argatus jechudha.
MAF – Kan jennu kuun warra gurgurtaatif kan inni kennamu sadarkaa qulqulinaa egamuu maluu hundumaa yoo kan guutan tahee qofaadha. Waraqaan kun kan kennamuus qaama meesha sana omishurrati malee qaama biraa miti.
Bu’aa isaa maali ?
Qarshiin kessan garmalees hin bahuu
Meshaa haaraa bitattu
Meeshaa fakkeffamee hojetamee (refurbished or copied) taheen hin gowomfamtan
Tajaajila suphaa qaama gurgure irraa ni argatu
Meeshaa sadarkaa qulqulinaa guute bitatu
Tajaajila gurgurtaan booda kennamu ni argatu
Rakkoo odeffaanno qisasefamuu isinitti hin fidu
(Sized solution) furmaata sadarkaa hamma isaa egate ni argatu, kana jechuun meeshaa isin bittan dhima barbadameef sanaaf sirritti oola.
Akka waa irraa baratan ni amana isinis kana hiriyoota keessaniif firoota kessaniin gaaha, bittaa milkaaha tahee akka isaan rawwataniif gargara.
Bittaa rawwachuu irratti yoo gargarsa keenya barbadan nu baressaa ( Contact us )